Vahaolana rafitra fitahirizana angovo, Vahaolana rafitra fitahirizana angovo any Sina Manufacturers, mpamatsy, orinasa - HNAC Technology Co., Ltd
Tetikasa tobim-pamokarana herinaratra
Ny tetikasa angovo vaovao
Tetikasa fiarovana ny tontolo iainana sy fikarakarana rano
Tetikasa tobin'ny paompy
Fitaovam-pitaovana mekanika sy elektrika feno
Diesel Power Generation Set
SCADA System Customization
Serivisy fampandehanan-tsaina sy fikojakojana
Atrikasa fanofanana iraisam-pirenena NHAC
Momba ny HNAC
Home>Mpanome vokatra>Energy Storage System Solution
Ny HNAC dia afaka mamatsy ny vokatra fitehirizana angovo izay misy milina fitehirizana optika, mpanova fitehirizana angovo ary fitahirizana angovo karazana boaty:
1. Optical fitehirizana milina Integrated: Optical fitehirizana milina Integrated dia fitaovana izay mifandray amin'ny photovoltaic array, ny bateria rafitra sy ny grid (sy/na entana) mba hahatsapa ny angovo angovo fiovam-po. Afaka mifehy ny fizotran'ny famoahana photovoltaic sy ny fizotran'ny famandrihana sy ny famoahana ny bateria. Manatanteraka fiovam-po AC-DC, dia afaka manome mivantana AC entana tsy misy herinaratra.
2. Mpanova fitehirizana angovo: Ao amin'ny rafitra fitahirizana angovo elektrika, izay fitaovana mifandray amin'ny rafitry ny bateria sy ny grid (sy/na entana) mba hahatsapana ny fiovan'ny angovo elektrika roa. Afaka mifehy ny dingan'ny fiampangana sy ny famoahana ny bateria, ary ny fiovam-po AC-DC. Izy io koa dia afaka mamatsy mivantana ny enta-mavesatra AC.
Ho an'ireo fitaovana roa voalaza etsy ambony ireo, ny vokatra fitehirizana angovo kely dia azo ampiharina amin'ny toe-javatra toy ny famatsiana herinaratra ao an-trano, famatsiana herinaratra eny an-tsaha, ary tobim-pifandraisana, ary ny vokatra fitahirizana angovo lehibe sy antonony dia azo ampiharina amin'ny toe-javatra toy ny angovo amin'ny lafiny taranaka. fitehirizana, fitehirizana angovo amin'ny lafiny grid, ary fitahirizana angovo microgrid.
3. Fitehirizana angovo karazana boaty: Ho an'ny fampiroboroboana ny vokatra sy ny fampiharana, dia novolavolaina ny vokatra mahazatra PCS efatra miaraka amin'ny kaontenera, ny vokatra vita amin'ny kabine mitambatra ho an'ny PCS booster efatra, ary ny vokatra fitehirizana angovo karazana PCS hafa sy ny rafitra fitehirizana angovo karazana boaty. azo namboarina sy novolavolaina. Ny rafitra fitahirizana angovo dia azo namboarina sy namboarina araka ny filan'ny mpampiasa samihafa. Afaka mahafeno ny fepetra takian'ny toe-javatra isan-karazany sy ny fahaiza-manao isan-karazany toy ny tampon-haratra / frequency modulation, multi-power micro-grid rafitra, ary haingana notapatapahina famatsiana herinaratra.
Ny toetoetran'ireo sokajy telo lehibe amin'ny vokatra fitahirizana angovo dia ahitana milina fitehirizana optika, mpanova fitahirizana angovo ary fitahirizana angovo karazana boaty:
1. Optical fitahirizana mitambatra milina:
A. Ny vahaolana mitambatra dia manohana ny fidirana miaraka amin'ny enta-mavesatra, ny bateria, ny tambajotran'ny herinaratra, ny mpamokatra gazoala, ary ny photovoltaics;
B. Integrated EMS miasa, famatsiana herinaratra dia azo antoka sy azo antoka, ary ny taham-pampiasana ny angovo vaovao dia ambony indrindra;
C. Fifindrana tsy misy hatak'andro eo amin'ny fanjakana on-grid sy off-grid, famatsiana entana tsy tapaka;
D. Fiarovana tanteraka ny fiarovana ny rehetra-in-iray milina sy ny bateria;
E. Fanohanana malefaka ho an'ny bateria lithium sy bateria asidra firaka
F. Ny fanaraha-maso photovoltaic dia azo itarina mba hanamora ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny photovoltaic
2. mpanova fitahirizana angovo:
A. Miaraka amin'ny fanonerana herim-po mahery vaika sy ny asa fanonerana mirindra, manatsara ny kalitaon'ny herinaratra;
B. Miaraka amin'ny fiarovana ny nosy sy ny fandehanana malefaka ambany amin'ny alàlan'ny fiasa (azo apetraka);
C. Intelligent mandroso sy mivadika asa hanatsarana ny rafitra azo itokisana;
D. DSP famolavolana mahatsapa ny tanteraka dizitaly fanaraha-maso ny angovo fitehirizana mpanova Module;
E. Fiarovana fiarovana maro, AC sy DC mihoatra sy ambany fiarovana fiarovana, fiarovana amin'ny circuit fohy;
F. Mampiasà teknolojia fanitsiana antonony mahery vaika mahery vaika mba hampihenana ny fitsabahan'ny harmonika amin'ny tambajotran'ny herinaratra;
G. Manana enta-mavesatra atsasaky ny onja izy io ary ny fampifanarahana ny entana.
3. Fitehirizana angovo karazana boaty:
A. Customizable famolavolana mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa isan-karazany;
B. rafitra rafitra BMS ambaratonga telo, azo antoka sy azo antoka;
C. Fampidirana rafitra avo, rafitra bateria mitambatra, PCS, rafitra fitantanana angovo, rafitra fanaraha-maso ny mari-pana, rafitra fiarovana amin'ny afo, rafitra fanaraha-maso ny fidirana, sns .;
D. Anisan'izany ny karazana mitoka-monina sy ny karazana tsy mitokana;
E. Millisecond switching azo ampiasaina ho toy ny backup hery famatsiana ho an'ny fitaovana manan-danja;
F. Izy io dia manana fifandraisana feno, fanaraha-maso, fitantanana, fanaraha-maso, fampitandremana mialoha sy fiarovana, asa maharitra maharitra sy azo antoka, fitadiavana ny sata mifehy ny rafitra amin'ny alàlan'ny solosaina mpampiantrano, ny fahaiza-manadihady angon-drakitra feno, ary ny famatsiana herinaratra maika.
Turbine Inlet Valve amin'ny Valve Butterfly, Valve Spherical ary Valve vavahady
Ny rafitra fanaraha-maso sy ny fiarovana
Tobim-pamokarana ivelany (tobin-tsolika)
Meteran'ny rano ultrasonic
Ny sandan'ny anjara HNAC Technology Co., Ltd
No. 609 Lusong Road, LuGu, Changsha, Hunan, Sina
Ny sandan'ny anjara HNAC Technology Co., LtdBlog